Xayeysiisyada Bandhiga ee Amazon ee ay kafaalo qaaday ee la beddeli karo ayaa si caalami ah ugu nool | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/Xayeysiisyada Bandhiga ee Amazon ee la kafaala qaadi karo ayaa si caalami ah ugu nool
Xayeysiisyada Bandhiga ee Amazon ee la kafaala qaadi karo ayaa si caalami ah ugu nool
0 Daqiiqad 1 akhri
Amazon waxa ay soo saartay awoodda xayaysiiyayaasha xaqa u leh in ay ku daraan summada summada oo ay u habeeyaan cinwaanka xayeysiisyada Bandhiga La kafaala qaado.
Unugyada Bandhiga La Kafilo ee la habeeyey waxay ku socon karaan boggaga sifaynta alaabta, faallooyinka macaamiisha, boggaga natiijooyinka wax iibsiga iyo hoosta soo jeedinta la soo bandhigay. Xayeysiisyadu waxay u soo bandhigaan si taxadar leh si ay ugu habboonaadaan cutubyada agabka ee shabakada, mobilada iyo in-appka.
Xayeysiyeyaashu waxay ku dari karaan habaynta xayeysiisyada Bandhiga La Kafilo.
Xayeysiisyada Bandhiga ee la kafaala qaaday waxay bartilmaameedsan karaan aragtiyo, badeecad ama xiiso. Si kastaba ha ahaatee, marka calaamad iyo cinwaan la isticmaalo, kaliya bartilmaameedka alaabta ayaa la heli karaa.
Beegsiga badeecada ee Bandhiga La kafaala qaaday ayaa bishii Abriil u bilaabmay iibiyeyaasha Maraykanka. Waxay gaartaa dadka suuqa ku jira, iyagoo eegaya alaabtaada iyo/ama la midka ah iyo qaybaha alaabta.
Beegsiga badeecada la kafaala qaaday ayaa diyaar u ah iibiyeyaasha iyo iibiyayaasha ka diiwaangashan Diiwaanka Brand.
Sababta aan u danayno. Astaamaha Personalizaton ayaa si caalami ah u soo baxay wax yar ka hor Maalinta Ra'iisul Wasaaraha ee toddobaadka soo socda ee Oktoobar 13 iyo 14 iyo degdegga wax iibsiga ee soo socda. Amazon waxay ku talinaysaa in la isticmaalo bartilmaameedka alaabta Bandhiga ee Sponsored si kor loogu qaado aragtida bogga alaabada cusub ama hoos-u-dhigga ee buug-yarahaaga.
Tani waxay gacan ka geysaneysaa dhisidda wacyigelinta iyo dib u suuqgeyn ballaaran oo daawadayaasha ah ee alaabooyinkan (taas oo markaas lagu gaari karo iyadoo la adeegsanayo aragtida la beegsanayo), Ku-daridda summadaada iyo cinwaanka loogu talagalay xayeysiisyadan waxaa loogu talagalay in lagu horumariyo wacyiga, dib-u-celinta iyo ka-qaybgalka.
Ku haynta Plugins-ka la cusboonaysiiyay waa muhiim, martigeliyaha WordPress ee la maamulo ayaa ku caawin kara
Walmart ma la tartami karaa Amazon Prime?
Sida Loo Bilaabo Blog 7 Tallaabo Fudud
Falanqaynta Google & Xogta Konsole-ka Raadinta Waligood Isma Maqna - Oo Waa kan Sababta
11 Tabaha SEO & Tabaha lagu Hagaajiyo Tilmaamaha Raadinta
saac ka hor 15
saac ka hor 16